Fivoriamben'ny boaty sy fivoriambe mekanika - Pandawill Technology Co., Ltd.
Ho fanampin'ny fivorian'ny birao vita pirinty (PCBA) dia manome fivoriambe fampidirana boaty ho an'ny rafitra sy modules ary koa ho fampidirana vokatra feno. Amin'ny alàlan'ny tamba-jotra mpamatsy tianay indrindra, izahay, ao amin'ny orinasa Asteelflash EMS, dia manohana anao hatrany A ka hatramin'ny Z, manomboka amin'ny teny nalaina ka hatramin'ny dingana famokarana betsaka ny tetikasanao.
Ny serivisy rehetra ao ambanin'ny tafo iray, ireo ekipa manompo ny vokatrao, dia singa fototra hidirana amin'ny tsena am-pilaminana.
Mihoatra ny PCBA, manolotra fampidirana boaty sy fivoriambe izahay amin'ny alàlan'ny fananganana tsipika fivoriambe natokana ho an'ny mpanjifa.
Mifantoka amin'ny fanatsarana tsy tapaka, manolo-tena izahay hanatsara sy hanatsara hatrany ny fizotry ny fivoriambe, hahomby kokoa amin'ny mpanjifanay ary noho izany dia mifaninana kokoa amin'ny tsenan'izy ireo. Miaraka amin'ny serivisy famokarana elektronika avo lenta, faritra sy ekipa vita fanoloran-tena natokana ho an'ny fahaiza-manao mahomby amin'ny fananganana fivorian'ny boaty amin'ny ambaratonga avo indrindra, manolo-tena izahay hanohana anao hampitombo sy hanamafy ny toerana misy anao eo amin'ny tsenanao, ho fanitarana ny ekipanao .
Amin'ny maha orinasa mpanamboatra fifanarahana elektronika dia mikendry ny hitondra tsara ny mpanjifanay izahay.
Mino ekipa sy fomba fiasa fiaraha-miasa izahay, manohana ny vokatrao amin'ny dingana famolavolana fa koa amin'ny faran'ny fiainana ny vokatrao, miasa amin'ny famelomana ny taranaka vaovao. Asteelflash, mpiara-miombon'antoka amin'ny Electronic Manufacturing Services (EMS) ho an'ny serivisy momba ny injeniera sy ny famokarana, manomboka A ka Z.
Ny vahaolana amin'ny famokarana elektronika ao amin'ny Box Build:
• Fivoriana elektro-mekanika sarotra
• Coating mifanaraka
• Fitsapana mandeha